China mpamokatra sy mpamatsy tontonana sokitra-YA204 | Yingjiwei
Endri-javatra amin'ny tontonana sokitra aluminium
2. Toetran'ny fanoherana ny toetr'andro sy ny toetran'ny fanoherana ny fanosorana.
3. Izy io dia azo zahana amin'ny endrika sarotra toy ny endriny
4. Multicolors hisafidianana.
5. Mora ny manadio sy mitazona.
6. Mora apetraka.
7. Sariaka amin'ny tontolo iainana, azo ahodina 100%.
Ny tontonana vita sokitra alimina dia voahodina miaraka amina lavaka samihafa na lamina samihafa amin'ny takelaka aliminioma amin'ny masinina sokitra. Amin'ny alàlan'ny fanodinana sokitra, ny takelaka vita amin'ny aliminioma fisaka dia mety hitarina tsy tapaka miaraka amin'ny fahatsapana habaka ary manana ny fiasan'ny hazavana sy rivotra. Ny fanovana sy ny lalao amin'ny tontolo ivelany isan-karazany amin'ny fitsaboana manokana, hahatonga ny tsipika ho velona sy kanto kokoa. Tsy toy ny fomba maodely fanaingoana nentim-paharazana, mety kokoa amin'ny klioba maoderina isan-karazany, haingon-trano ary birao izy io.
Ny takelaka voasokitra vita amin'ny aliminioma dia azo raisina ho toy ny takelaka aluminium tsy misy lavaka, azo tapahina sy sokitra ilay lavaka misy 10,0mm ny hateviny, ary ny masinina fanodinana dia mampiasa milina CNC. Ampiasaina indrindra amin'ny fitaovana isan-karazany, fomba fanodinana mety indrindra amin'ny fanapahana precisioin avo lenta, endrika lehibe ary lamina endrika manokana. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma dia azo sokirina ao anaty akanjo tsy misy fenitra vita amin'ny aliminioma izay samy hafa habe sy endrika mitovy amin'ny endrik'ireo mpanjifa. Ary azo amboarina ho modely isan-karazany toy ny valindrihana, rindrina ambain, andry sns.
Karazam-panafody arte punching: modely totohondry, famoronana totohondry, totohondry mavesatra, totohondry manify ultra, totohondry lavaka mikraoba, totohondry fanapahana tsipika, famonoana laser, sns
Manaja ny natiora isika ary mifanaraka amin'ny volavolan-kevitra famolavolana kalitao avo lenta. Rehefa nanova ny tontolom-piainantsika ny indostrialy sy ny tanàn-dehibe, dia miezaka ny mpanao asa-tanana hitady tontolo milamina sy manavao tena, mamerina ny toetra faharoa ary manatsara ny tontolo iainantsika. Toy ny sary hosodoko sokitra kolontsaina mampiavaka ny tanàn-dehibe, maritrano mampiavaka, tontolo mampiavaka, fanahy mampiavaka. Ireo mpanao asa-tanantsika dia mirakitra an-tsoratra tsara ny fanovana ny tanàna.
Anaran'ny vokatra Takelaka voasokitra vita amin'ny aluminium
Fitsaboana ambonin'ny tany Famonoana PVDF / Famonoana vovoka / Anodized
Color Izay loko RAL, loko matevina, loko metaly
hateviny 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Fomba fanodinana Fametahana, fanapahana, aforitra, hiondrika, famolahana, fangejana, fanamafisana, fikosehana, hosodoko ary fonosana.
Fampiharana Mety amin'ny ety anaty sy ivelany, ny hazo sy ny andry, ny lavarangana, ny vavona, ny efitrano fandroana, ny hotely, ny hopitaly, ny trano fonenana, ny villa, ny gara, ny gymnasium, ny seranam-piaramanidina, ny toeram-pivarotana, ny opera, ny kianja, ny birao ary ny trano fanaovana birao
Teo aloha: Panel voaravaka-YA313
Manaraka: Tantely tantely YB101